HDPE ပြုပြင်ခြင်းကုန်းနှီးပေးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ် - စက်ရုံစျေးနှုန်း - နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး
HDPE ပိုက် fittings
HDPE Butt Fusion ကို Fittings
PP ချုံ့ Fittings
HDPE / PPR Socket Fusion ဂဟေဆော်စက်
HDPE Butt Fusion ဂဟေဆော်စက်
HDPE Electrofusion ဂဟေဆော်စက်
PPR ပိုက်နှင့် fittings
PPR ပိုက် fittings
တူးပိုက် Floater / Floats
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > HDPE ပိုက် fittings > HDPE Butt Fusion ကို Fittings > HDPE ပြုပြင်ကုန်းနှီး
HDPE Butt Fusion လက်ဝါးကပ်တိုင် Fittings
HDPE Electrofusion Stub အနားကွပ်
PP Clamp ကုန်းနှီး
HDPE ပိုက်များအတွက်ဆေးထိုးထားသောပုံသဏ္HDာန် HDPE Repair Saddle၊ SDR11 တွင် ၄၀ မှ ၆၃၀ မီလီမီတာ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ၁၅ နှစ်နှင့်ညီမျှသည်၊ အပြိုင်အဆိုင်လက္ကားစျေးနှုန်းများ၊ ပုံမှန်အရွယ်အစားအတွက်သိုလှောင်နိုင်ခြင်း၊ HDPE Repair Saddle အကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ချိတ်ဆက်ခြင်း၏တင်းတူး fusအိုင်းယွန်း နည်းလမ်းဝေးအားဖြင့်အားလုံးသော polyethylene ပိုက်ချိတ်ဆက်၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူဖိအားအောက်တွင်အတူတကွယူဆောင်လာသောအခါ polyethylene ပိုက်၏စွန်းများသည်စဉ်ဆက်မပြတ် "ယိုစိမ့်သော" ပိုက်လိုင်းဖြစ်သည်။ စနစ်တကျပြုလုပ်ထားသောပိုက်ပေါင်းစပ်မှုသည်ပိုက်ကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့ခိုင်မာပြီးသက်တမ်းတူသည်။
SUNPLAST HDPEbutt Fusအိုင်းယွန်း fittings များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကျော်ကြားသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံမှတင်သွင်းထားသော PE80 သို့မဟုတ် PE100 ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့အားအဓိကအားဖြင့်ရေနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက် SUNPLAST HDPEပိုက်စနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။ HDPEတင်းတူး fusအိုင်းယွန်း fittings သည် EN12201-3, EN1555 & EN ISO 15494 စံနှင့်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာနိုင်သည်။SUNPLAST သည် HDPEbutt fittings fittings များကို SDR11 & SDR13.6 / SDR17 ရှိ DN63mm မှ DN800mm အထိကျယ်ပြန့်သောအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ - အဆုံး၊ အတိုချုပ်၊ အနား၊ သံမဏိနောက်ခံကွင်း၊ တန်းတူ tee၊ 45deg, တံတောင်ဆစ် 90deg ။ , etc ။
မှတ်ချက် - SUNPLAST သည်ပုံမှန်အရွယ်အစားသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏများစွာရှိပြီးအချိန်တိုအတွင်းပို့နိုင်သည်။
DN4၀-63၀ မီလီမီတာ (အပြင်ဘက်အချင်း)
SDR / ဖိအား ratings
Vအိုင်းရင်း PE80 သို့မဟုတ် PE100 ကုန်ကြမ်း
သေးငယ်တဲ့ dia ။ 63-280mm ကိုပုံးများဖြင့်ထုပ်ပြီးကြီးမားသော dia.315-800mm ကြီးများကို PP အိတ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးသည်
7-10 days fora20ft container, 1၀-15 days fora40ft container.
ပုံမှန်အသုံးပြုရန်အတွက် 15 နှစ်
မျက်မှောက်မှာ T / T သို့မဟုတ် LC
HDPEကုန်းနှီးပြုပြင် can be provided from dn63mm to dn630mm, with the dimensအိုင်းယွန်းs as below:
Material of excel performance is one of the qualificatအိုင်းယွန်း with produce the topping piping system. SUNPLAST company generally adopts TOP QUALITY raw materials from worldwide reputed factories in the productအိုင်းယွန်း of pipes and fittings.Those materials are recognized as the top raw material by the professအိုင်းယွန်းal in this vocatအိုင်းယွန်း. The preferable performance of those materials and their stability establish the high quality statအိုင်းယွန်း of SUNPLAST piping products and fittings on the markets.
တင် & တင်ပို့
SUNPLAST HDPEpipe fittings owe high reputatအိုင်းယွန်း of good quality in our exporting markets. The fittings have been exporting to more than 15 countries, and all our customers are satisfied on us.
အောက်ပါတို့မှထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါကလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံများ၊ စက်ရုံများ၊ စျေးနှုန်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊
ကုန်းနှီးပြင်ပါHDPE ကုန်းနှီးHDPE ပိုက်ပြုပြင်ခြင်းကုန်းနှီးPoly ပြုပြင်ကုန်းနှီးPoly ပိုက်ပြုပြင်ပစ္စည်းများHDPE ပိုက်ပြုပြင်ရေး CoulingPoly ပိုက်ပြုပြင်ခြင်းနားချင်းဆက်မှီHDPE ပြုပြင် CoulingHDPE ပြုပြင် ClampHDPE ပိုက် fittings
HDPE Butt Fusion 90 ဒီဂရီတံတောင်ဆစ်
HDPE Butt Fusion ကို 45 ဒီဂရီတံတောင်ဆစ်
HDPE Butt Fusion ကို 22.5 ဒီဂရီတံတောင်ဆစ်
HDPE Butt Fusion တန်းတူ Tee
HDPE Butt Fusion ကိုအဆုံး Cap
လိပ်စာ: Luotuo စက်မှုဇုန်၊ Zhenhai ခရိုင်၊ Ningbo City၊ Zhejiang ပြည်နယ်၊ တရုတ်
လက်လီလျှပ်စစ် PPR ပိုက် Socket Fusion ကိုဂဟေဆော်စက် 20/632020/06/24
ပါဝါဖွင့်ပါ၊ (ပါဝါသည်ယိုစိမ့်နေသောလက်ရှိကာကွယ်မှုနှင့်အတူရှိသင့်ကြောင်းသေချာပါစေ)၊ အစိမ်းရောင်မီးနှင့်အနီရောင်မီးဖွင့်ပါ။ အနီရောင်မီးမပိတ်မှီစောင့်ပါ။ အစိမ်းရောင်မီးကိုဖွင့်ပါ။ အသုံးပြုခံ့။
Pex Al Pex ပိုက်အတွက်ကြေးဝါကိုနှိပ်ပါ2020/05/28
ဤတွင် pex Al pex ပိုက်အတွက်ကြေးပြားပုံနှိပ်စက်၏နိဒါန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်နားလည်ရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သြစတြေးလျသို့ SUNPLAST DN1000 / DN1200mm HDPE ပိုက်2019/03/20
အရည်အသွေးမြင့် HDPE ပိုက် electrofusion fittings2019/03/14
SUNPLAST သည် HDPE ပိုက်များကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်နှစ် ၂၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ HDPE pipes & HDPE pipe fittings သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုရရှိရန်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်သော PE100 ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ရေပေးရေးအတွက် Electrofusion တံတောင်ဆစ် HDPE ပိုက်တပ်ဆင်2018/11/15
PPR ပိုက်တပ်ဆင်ထားသောနံရံကပ်တပ်ဆင်သည့်အုပ်စုအမျိုးအစား a2018/11/15
မူပိုင်ခွင့် @ 2020 Ningbo Sunplast Pipe Co. , Ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။